Grant Cardone Gulfstream G200 sharax sababta Jet Private Charter Flight VS Buy Diyaaradaha Diyaarad Aviation dareen waayo ganacsadaha ganacsi ama safar shakhsi u tagaan si ay u sameeyaan http://wysluxury.com/location/ meesha kuu dhow
Marka aad u soo duuli gaar ah uma baahnid inaad si ay ula noqon 200 dadka ku ridin qol ah, laakiin waxa ugu weyn waa diyaarad kuu baajinaysaa waqti. Diyaarad A waa qalab ganacsi. Qof kastaa wuxuu leeyahay diyaarad micno ma samaynayso. Dadkani ma haystaan ​​diyaarado. i tusiya qof runtii hodanka ah oo waxaan ku tusi doonaa qofka leh jet ah. Doorashadii Grant waxay ahayd Dhex-dhexaad Cabbirka Gacanka 200. Waqtiga waa lacag, si uu maal-iibsataa waqtiga. Hel hodan iyo aad leedahay karaa jet ah. Waa maxay sababta aan?
Qaadashada Delivery of Gulfstream 550 – Grant Cardone 10X diyaaradaha Airlines cusub $50 milyan oo dollar jet
Way ka weyn tahay, si dhakhso ah, oo ka wanaagsan aan diyaarad hawada ugu horeysay 10X. Xusuusnow, hadaadan koreyn, waad fadhiisatay…joogitaanku wuxuu had iyo jeer u horseedi doonaa foosha. Waad been abuuri kartaa lambo laakiin been kama beenin kartid diyaarad g550 ah. Hel Iibiyaha top Grant Cardone Audiobook jeclaan iibiyo ama in la iibiyo, THE dhow EE Badbaadada TILMAANTA, XEERKA 10X THE, HADDII AADAN YIHIIN HORE, AAD tahay DAMBE, XEERARKA GUUSHA iyo qaar badan oo download.
Gulfstream helay Galaxy Aerospace ee 2001. helitaanka arkeen guutadii dhaxli jet diyaaradaha Galaxy asalka, kaas oo ahaa in wax soo saarka u dhexeeya 1999 iyo 2001. Galaxy asalka ah waxaa magacooda loo baxshay G200 by Gulfstream. Inta u dhaxaysa 2001 iyo 2011, Gulfstream garaysan wax soo saarka ee ku dhow 250 cutub oo Gulfstream ah 200 jet diyaaradaha. G200 ayaa la bedelay ee 2012 by G280 ah. Haddii aad raadinayso jet raaxo si ay u iibsadaan a, qodobkan ayaa kuu sheegi doona sababta Gulfstream 200 waa in ay doorashadaada kowaad.
Grant Cardone Isbarbardhigaya Global a 6000 si uu Gulfstream
Waxaa jira badan oo sababaha waa inaad tixgelisaa inaad iibsato G200 ah ka gaartay dayuuradaha kale. First of dhan, this jet super-midsize bixisaa raaxada iyo kala duwan oo ka mid ah Diyaaradaha qol weyn. Qolkeeda baaxadda leh waxay si raaxo leh u fadhiisisaa sagaal rakaab ah oo leh qolka sare ee taagan 6'3″, taas oo ah meel bannaan oo ka badan diyaaradaha kale ee la mid ah waxay bixiyaan. Gulfstream G200 waa fiican ee safarka transcontinental toos ah oo uu leeyahay xawaare safar of a 540 mph. Sidoo kale, G200 uu leeyahay awoodda ugu weyn ee ay fasalka Alaabtoodii.
Hoos waxaa ku qoran qaaska ah ee diyaaradaha waxan aad ku qasbi doono in ay soo iibsato:
Falanqaynta Performance iyo Trip
– xawaaraha safar ugu badnaan: 470kts
– Celceliska xawaaraha block: 396kts
– Range leh kuraasta madhan: 3,530nm
– Range la kuraasta haysto: 3,130nm
– Rate ee fuulid: 3,700ft / min
– Celceliska gubashada shidaalka: 278gal / hr
– dhererka Balanced beerta: 6,600ft
– sare hawlgalka ugu badnaan: 45,000ft
Falanqaynta Trip (1000nm)
– Shiidaalka gubatay: 278gal
– sare Flight: 43,000ft
– Qiimaha shidaalka @ $ 5.00 / gal: $1,390
– mugga qol: 869cuft
– width qol: 7.20ft
– dhererka qol: 24.5ft
– height qol: 6.25ft
– The Raven: 58.1ft
– Dhererka: 21.4ft
Culayska iyo raaxada
– miisaanka duushay ugu badnaan: 35,450lbs
– miisaanka aasaasiga ah hawlgalka: 19,950lbs
– Payload la shidaalka buuxa: 650lbs
– shidaalka la isticmaalayo: 15,000lbs
– kuraasta: 8
– awoodda Alaabtoodii Dibadda: 125cuft
– awoodda Alaabtoodii Gudaha: 25cuft
List of wax yar oo aad sameyn karto marka aanad ku xiran tahay safarrada dayuuradaha ee 1 maalintii
Gulfstream G200 waa diyaarad dhaqaale oo bixiya raaxo iyo kala duwan oo labada. taas laga soo tago, G200 waa waasac iyo ayaa rikoor ammaanka aad u cajiib ah. Sidaa darteed, markaad gadeyso diyaaradaha jet ah, doorato ka liiska diyaarad Gulfstream.
Behind weraro 10X Airlines – Grant Cardone
Gudaha Grant Cardone ee 10X Airlines Gulfstream Jet
Grant Cardone 10X List Of waxyaabaha at https://goo.gl/r51fVY
Secret of Lahaanshaha Jet Private